ICasa Caisua- Indawo yokuhlala yaseSusegad Goan eLoft yeVilla - I-Airbnb
ICasa Caisua- Indawo yokuhlala yaseSusegad Goan eLoft yeVilla
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSharvil
ICasa Caisua yindlu yaseSusegad Village eseAnjuna kwaye iNestled kanye embindini welali, ibekwe kwindawo yabucala eyi-20,000-square-feet Orchard kwaye kukuhamba imizuzu embalwa ukuya eVagator beach. Isakhiwo, simi ubude phakathi kohlaza oluluhlaza kunye naphantsi kwelanga elikhanyayo, lugxininiswe ngeentsomi ezininzi eziye zavuselelwa ukuba zidibanise kwixesha lanamhlanje. I-Casa Caisua, malunga nenkulungwane yendlu endala yabuyiselwa ngononophelo ngendlela ebuthathaka, igcina umtsalane wesakhiwo sokuqala sinjalo.
Le ndlu inegumbi lokulala elikhulu, elinesitayile esiphezulu, elinegumbi lokulala eliphambili, igumbi eliphezulu kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elikhokelela kwishawari evulekileyo ukuya esibhakabhakeni. Ikwaneveranda engaphambili kunye nepheyile engasemva ejonge kwigadi yeziqhamo. Indlu engaphandle ecaleni kwe-villa inekhitshi labucala elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nekota yomnakekeli. Le Villa ilungele abantu aba-2-3 kwaye inikezela ngothotho lweendawo ezivulekileyo ezibandakanya imbonakalo yomhlaba ngaphandle kweendawo zokuhlala zangaphakathi.
I-villa ngokwayo iyilelwe ukuvuselela imvakalelo yobunewunewu obuphantsi ngokusebenzisa incasa egcinwe ngokucokisekileyo yemathiriyeli yendalo, umxube wefenitshala ye-eclectic kunye nezinto zokuhombisa kwaye ibekwe embindini womhlaba oshinyeneyo wetropiki. Igadi engasemva kwipropathi inemithi yeziqhamo esele ivuthiwe kunye nemifuno enkulu.
Ibandakanya ubungakanani benkosi, ibhedi enepowusta ezine, isofa kunye nebha encinci, igumbi lokulala eliphambili eCasa Caisua yindawo yokuhlala yasezidolophini. Ngokuhambelana nomphandle we-villa, enemibala eqaqambileyo, enesibindi kwiingcango kunye neentsika, igumbi lokulala lizaliswe ngezesekeli eziphilileyo ngendlela ye-cushions, ubugcisa bodonga kunye ne-drapes. Imibala ezolileyo eluhlaza okwesibhakabhaka idityaniswe ne-orenji evuthayo kunye nobomvu, ngoko ke yongeza idrama kolu cwangciso luncinci.
Indawo ye-mezzanine eCasa Caisua isebenza njengendawo yokubuyela umva, ilungele ukufunda, ukuhlala okanye ukulala. Ngokuchasene neendonga ezityatyekiweyo, le nook, ngelixa ihleli ibonakala kubuchule bayo, inika umbono omangalisayo wendawo yonke yangaphakathi kunye nomboniso omangalisayo wangaphandle wendlela izithuba ezinokufumana ngayo unxibelelwano olufihliweyo kunye nokunyibilikisa imida, isitepsi esinye ngexesha.
Ukuhlala unyanisekile kwiifom ze-organic zesakhiwo, igumbi lokuhlambela lidibanisa ngaphakathi kunye nangaphandle. Eli candelo lendawo yokuhlambela evuleleke kancinci lidlulela kwishawari evulekileyo eneendonga zekhonkrithi engwevu ebandayo, kunye nomgangatho ocoliweyo. Kanye ngasentla, amagqabi esundu anwenwela kwisibhakabhaka esicacileyo, enika ubunzulu obubonakalayo kuwo wonke umsebenzi wokwakha wegumbi lokuhlambela elibanzi.
Mhlawumbi into ejikeleza iCasa Caisua yindlela imida ephakathi kwendlu yangaphakathi nangaphandle efiphala ngenyathelo ngalinye. Ubume boyilo lwayo bubonisa amava abonakalayo amakhulu kwaye abambekayo ngaxeshanye. Iveranda yokuqala yendlu, eneneni, inokufumaneka ukusuka kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. Ipavilion yangasemva iphinda iphindwe kabini njengeyona ndawo yokuhlala iphambili, ivuleleka kuwo onke macala eegadi eziluhlaza ejikelezwe ngazo.
Nanjengoko kwihlabathi jikelele, uyilo kunye nomzabalazo woyilo ngokuchasene nengxokozelo yemibono engaphezulu, iCasa Caisua ibalasele ngobunyani bayo, apho kuhlala khona umhlaba kwaye ufumane uxolo lwayo. Kwaye kanye apho kulele eyakho i-susegad encinci, kwesi siqwenga esivuselelweyo seGoa.
IVilla ikufuphi kakhulu elunxwemeni kwaye ikufutshane nazo zonke iindawo zokutyela ezithandekayo kunye nemivalo ejikeleze le ndawo. Kodwa awuyiva ingxolo yezitrato eVilla.
Umbuki zindwendwe ngu- Sharvil
Singakuvuyela ukukunika yonke into oyifunayo emntwini okanye nge-WhatsApp. Ndiya kuba ngaphakathi kwaye ndijikeleze iVagator ngexesha lokuhlala kwakho, umnxeba nje kude. Siyakuqinisekisa, ukwenza iholide yakho ibe mnandi kwaye ihlale i-susegad.
Singakuvuyela ukukunika yonke into oyifunayo emntwini okanye nge-WhatsApp. Ndiya kuba ngaphakathi kwaye ndijikeleze iVagator ngexesha lokuhlala kwakho, umnxeba nje kude. Siyakuqini…
Inombolo yomthetho: HOTN002206
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vagator, Anjuna